बनेपा हेल्थ केयरले प्रभावकारी तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिएको छ: प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र थापा - khulla Post
पुरुषोत्तम ढकाल १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १८:४६ 709 Views
काभ्रे: काभ्रे जिल्लाको बनेपामा रहेको बनेपा हेल्थ केयरका प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र थापा संग गरिएको कुराकानी :
आज भोली दिनहरु कसरी विताउदै हुनुहुन्छ ?
बनेपा हेल्थ केयर जुन स्वास्थ्य सेवामा समर्पीत संस्था हो र यहि संस्थामा आउनुभएका विरामीहरुको सेवामा नैं दिनहरु वित्दै छन् । विरामीहरु लाई बिना कुनै झन्झट सहज तरिकाले सेवा दिन अनवरत रुपमा लागी परेका छौं । साथै सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सामाुदायिक स्कुल, कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य सामाग्री वितरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यस्त छु ।
बनेपा हेल्थ केयरको पृष्टभुमिका बारेमा बताईदिनुहोस् न ।
बिगत १० वर्ष भन्दा लामो समय देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका हामी काभ्रेली साथीहरुले आफ्नो जन्म जिल्लामा पनि स्वास्थ्य सेवा दिने योजना बनाइरहेका थियौं, अहिले नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ? भन्ने सोचलाई मध्यनजर गर्दै केहि समयको गृहकार्य पछि युवा जोशले भरपुर सञ्चालकहरुको एक मात्र भाव सेवा भावले ओत प्रोत भई आम जनसमुदायलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिने प्रणका साथ स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुने वाचा सहित बनेपा हेल्थ केयरको स्थापना भएको हो ।
बनेपा हेल्थ केयरले के–कस्तो प्रकारको स्वास्थ्य सेवा दिदैं आएको छ ?
बनेपा हेल्थ केयरले जनरल फिजिसियन देखि विशेषज्ञ चिकित्सक द्धारा सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको छ । आधुनिक चिकित्सा पद्दति अन्तर्गत रहेर बनेपा हेल्थ केयरले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ । हाम्रो सेवाहरु विहान ७ः०० बजे देखि सांझको ७ः०० बजे सम्म चिकित्सक द्धारा जांच तथा उपचार हुन्छ। यसका साथै हाम्रो मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर रविन्द्र प्रसाद राजभण्डारीको क्लिनिक विहान १०ः०० बजे देखि ४ः०० बजे रहेको छ भने रेडियोलोजिष्ट देखि विशेषज्ञ चिकित्सक अनुभवि स्वास्थ्य कर्मि तथा विभिन्न उपकरण जस्तै डिजिटल एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, अत्याधुनिक प्रयोगशालाले सु–सज्जित हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाले विविध समस्याहरु जस्तै हाड जोर्नीका समस्या, महिलाका समस्या, छालाका समस्याहरु, पेटका विविध विरामहरु, टाउकाको समस्या, थाइराइड तथा मधुमेहको समस्या संगै दांतका विभिन्न समस्याहरुको सहज तरिकाले उपचार गर्दै आएको छ ।
दांतको के कस्तो उपचार हुन्छ ?
हाम्रो हेल्थ केयरमा दांतको अनुभवि चिकित्सक द्धारा दांत निकाल्ने, दांत सफ गर्ने, दांत भर्ने, नमिलेको दांत मिलाउने, दांतको एक्स–रे गर्ने, नक्कली दांत बनाउने लगायतका दांतको उपचार हुन्छ ।
बिरामीहरुको लागि छुटको सुविधाहरु के के छन् ?
बिरामीहरुको लागि बनेपा हेल्थ केयरले विभिन्न छुटको सुुविधाहरु बनाएका छौं । हामिले धेरै वटा संग–संस्थाहरु सित सहकार्य गरि ति संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरु, कमर्चारीहरु तथा ग्राहकवर्ग को लागि न्युनतम ५ प्रतिशत देखि अधिकतम २० प्रतिशत सम्मको छुटको व्यावस्था गरेका छौं । हाम्रै हेल्थ केयरमा पनि सहुलियत कार्ड बनाएर औंषधि देखि अन्य उपचारमा पनि छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । आम माहानुभाव तथा विरामीहरुलाई सुविधा दिने हेतुले सम्पुर्ण शरिरको जांच ९ध्जयभि द्ययमथ अजभअप गउ० मात्र २५०० मा गर्दै आएका छौं ।
बनेपा हेल्थ केयरमा बिरामीहरुले कुन कुन रोगको उपचार गर्न पाउछन् ?
मैले अघि पनि भने बनेपा हेल्थ केयरमा सामान्य समस्या देखि हाड जोर्नीको समस्या, महिलाहरुको समस्या, छालको समस्या, मुटुको समस्या, थाइराइड तथा मधुमेहको समस्या, दांतको समस्या लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरुको जांच तथा उपचार हुन्छ ।
बनेपा हेल्थ केयरमा आएर उपचार गर्नको लागी खर्च चैं कति लाग्दछ ?
हाम्रो बनेपा हेल्थ केयरको “शुलभ शुल्कमा प्रभावकारी तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा” भन्ने स्लोगन नै छ। अन्य सामुदायीक अस्पतालमा जांदा जति खर्च लाग्दछ त्यति नैं वा त्यो भन्दा पनि कम शुल्कमा जांच तथा उपचार हुन्छ । हामी आफ्नै जिल्लाका बिरामीहरुलाई थोरै भन्दा थोरै शुल्कमा जांच तथा उपचार होस् भन्ने योजना संगै अघि बढिरहेका छौं ।
बनेपा हेल्थ केयरले समुदायीक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत के के काम गर्दै आएको छ ?
संस्था सञ्चालन गरिसके पछि समुदायलाई स्वास्थ्यको बारेमा जनचेतना जगाउनु, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनु तथा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु सौंजन्य गर्नु हाम्रो दायित्व हो त्यसैले सामुदायिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत हामिले कोभिड १९ को माहामारी भएको वेलामा पनि कोभिडको बारेमा स्कुल, कलेजमा, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा विभिन्न क्लबहरुमा गएर कोभिड १९ को बारेमा जनचेतना फैलायौं । विभिन्न समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि आयोजना गरिरहेका छौं भने गएको फागुन १० गते बनेपा नगरपालीकामा भएका स्वास्थ्य चौंकिहरुमा निःशुल्क रुपमा वाटर डिस्पेन्सर प्रदान गर्यौ । विभिन्न सामुदायिक कलेज तथा स्कुलहरुमा निःशुल्क मास्क, सेनिटाइजर, फस्ट एड किट लगायतका स्वास्थ्य समाग्री पनि वितरण गर्दै आएका छौं ।
आगामी दिनमा यहांहरुको योजनाहरु के के छन् ?
अहिले हामी वहिरंग सेवा मात्रै दिइरहेका छौं । निकट भविश्यमा नैं हामीले अन्र्तरंग सेवा पनि दिने योजना बनाएका छौं । हामीले सि.टि. स्क्यान सञ्चालन गर्ने पनि योजना अगाडि सारेका छौं ।
बनेपा हेल्थ केयर निजि लगानिमा सञ्चालन भएता पनि यो सारा काभ्रेलीको स्वास्थ्य संस्था हो । हाम्रो एक मात्र लक्ष्य भनेको एउटै छानामुनि विविध निदान तथा उपचार गरी विरामीहरुलाई विना कुनै झन्झट पारिवारिक वातावरणमा उपचार गर्नु हो । छोटो अवधिमा नैं बनेपा हेल्थ केयरले एक अलग पहिचान बनाइरहेको छ र आम विरामीको भरोसाको केन्द्रको रुपमा स्थापित हुदैं छ । त्यसैले आम जनसमुदायलाई नहिच्किचाई बनेपा हेल्थ केयरमा आइ स्वस्थ्य सेवा लिनुहुन यहांको सञ्चार माध्यम द्धारा अनुरोध गर्दछु ।